eNasha.com - नाङ्गै जिम गर्नुस्
नाङ्गै जिम गर्नुस्
कपडालाई बोझ ठान्ने केटीहरुका बारेमा त तपाइँले सुन्नु भएकै होला ! कपडालाई बोझ ठानेर तिनले तल या माथि लगाउने लुगामा कटौती गरेर कमभन्दा कम लुगामा कसरी आकर्षक देखिने भन्ने फेशनको होडबाजी त तपाइँ हामीले देखेकै हो । तर कपडालाई बोझ ठान्नेहरुका लागि केन्द्रित गरेर एउटा जिम खोलिएको छ ।
कपडारहित यो जिम पूर्वी नेदरल्याण्डमा गएको मार्च ४, २००७ देखि शुरुवात गरिएको हो ।
आउनुहोस्, यो जिम खुलेको दिन त्यहाँ के कस्तो घटना घट्यो, त्यसको जानकारी लिऊँ ।
डच जिमले शहरका एक दर्जन अधवैंसे र वृद्ध पुरुषहरुलाई नग्न शारीरिक अभ्यास गर्ने निम्तो पठायो । तर कस्तो भयो भने त्यहाँ नग्न शारीरिक अभ्यास गर्ने पुरुषहरुभन्दा रमिते पत्रकारहरुको संख्या बढि भइदियो ।
फिटवर्ल्ड नामक सो जिमका सञ्चालक प्याटि्रक डी म्यानले पत्रकारहरुलाई नग्न शारीरिक अभ्यासको पहिलो सेसन 'नग्न आइतबार' प्रवेश दिएका थिए । नग्न शारीरिक अभ्यासप्रति लोग्नेमान्छेको यस्तो चासो रहृयो कि त्यहाँ रुस र अष्ट्रेलियाबाट समेत आइपुगे ।
तर नग्नता नै जीवन हो भन्ने विश्वास गर्नेहरुले चाहिँ ठीकैको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
हेटेरन, आर्मस्टडमबाट ६० माइल पूर्वी यो सानो शहरमा सानो संख्यामा नग्न जिममा चासो देखाउन आएका थिए । तिनीहरु आउनुभन्दा अघि नै एउटा सानो जिम कोठा फोटो, टीभी र अन्य पत्रकारहरुको समेत खचाखच भरिएको देखेर चकित परे ।
आएका मध्ये हेनेक नाम बताउनेले एपी समाचारलाई भने- "हामीले नाङ्गै पौडी त खेलेको हो... तर नाङ्गै जिममा अभ्यास गर्नु चैँ साँच्चिकै नौलो अनुभूति हो ।" कपाल सेतै फुलेका हेनेकले आफूले चलाइरहेको पेडल दबाउँदै भने- "यो हेर्न लायकको चिज पनि हो । त्यसैले त तपाइँहरु थुप्रिनु भएको छ !"
त्यसो त स्थानीय राजनीतिक नेता र नग्न पर्यटन व्यवसायीहरु योबारे बेखबर चाहिँ छैनन् । त्यहाँ एरोबिक्स सिकाउने कुनै पनि नग्न शिक्षक वा शिक्षिका नियुक्त छैनन् । बरु त्यहाँका कर्मचारीहरुले आफ्नो शरीरमा नग्न चित्र कोरेका छन्, जसलाई न्यूड बडी पेन्टिङ भनिन्छ । त्यसो त न्यूड बडी पेन्टिङमा पनि उनीहरुले एप्रोन लगाउने गरेका छन् ।
डे म्यानले सोचे- यो आइडिया निकै बिक्न सक्छ, यो अरुका लागि रुचिकर विषय पनि हुनसक्छ कि शरीरको व्यायाम नग्न रुपमै किन नगर्ने ! त्यसो त यो सोच उनलाई त्यतिबेला पलायो, जब केहीले पुरुष र महिलाका लागि किन बेग्लाबेग्लै ड्रेसिङ कोठा बनाएको भनी प्रश्न गरे । उनीहरु पुरुष र महिलाको एउटै ड्रेसिङ रुम चाहन्छन् भने नग्न रुपमै किन शारीरिक व्यायाम चाहँदैनन् होला !
त्यसो त डच फेडरेशन अफ नेचरिस्टले यो सोचलाई यति रुचायो कि आफ्नो संघ मातहतका ७० हजार सदस्यलाई नग्न रुपमा बजार हजार डुल्नुभन्दा नग्न रुपमा जिम गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।
त्यसो त डी म्यानको 'नेकेड सन्डे' अभियानमा कुनै पनि महिला देखा परेनन् । त्यसो त त्यो दिनका लागि एक सय जनाले आफूलाई दर्ता गराएकामध्ये आठ जना महिलाहरु पनि थिए ।
"शुरुमा त महिला लजाइ हाल्छन् नि !" हेनेकले महिलाहरु नआएकोमा आश्चर्य मानेनन्, थपे- "तपाइँ आफैँ हेर्नुस्न, न्यूडिस्टहरुको क्याम्पमा पनि साह्रै कम महिलाहरु देखिन्छन् । झन् यो त जिमको कुरा भयो ।"
त्यसो त नेदरल्याण्ड यसको खुला यौनिक आचार व्यवहारका कारण विश्वचर्चित नै छ । महिलाहरु समुद्र किनारमा 'टपलेस' नै घुम्छन् । टेलिभिजनमा समेत नग्नता र्सवस्वीकार्य भइसकेको छ । निश्चित ठाउँमा वेश्यावृत्तिले समेत कानूनी मान्यता पाएका छन् ।
तर पनि शहरका ५ हजार १ सय जनता निकै दुःखी छन् यो नेकेड सन्डे अभियानबाट । तिनले यसको विरोधमा हस्ताक्षर अभियानसमेत शुरु गरेका छन् ।
"यस्तो घटिया सोच लिएर पनि तिमीहरु आउँदा रहेछौ भनेर मलाई आश्चर्य लाग्यो," क्लबको वेबसाइटमा एक पाठक लेख्छन्- "यस्तो गर्न मन छ भने घरमै गरे भै गो नि, किन सार्वजनिक ठाउँमा रमिता गर्नु पर्‍यो र !"
यता सरकारको समेत सहयोग रहेको यो क्लबका बारेमा स्थानीय सरकारले भनेको छ- "आखिर नग्नवादीहरुको पनि त नग्न हुने अधिकार छ नि ! तिनको अधिकार पनि त हामीले विचार गर्नै पर्‍यो !" "केही व्यक्तिहरु यो देखेर ज्यादै खुशी भएका छन्", क्लबको उद्घाटन गरेका स्थानीय सरकारका काउन्सिलर प्रिmत्स वित्जेसले भने ।
नग्न जिमवालाहरु त्यसो त दुइ तीन नियम भने कडा रुपमै अपनाउनु पर्छ । जस्तो किः तिनले वेट मेसिनमा रहँदा तौलिया आफूमाथि ओछ्याउनै पर्छ, तिनले पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने डिस्पोज गर्ने सिट कभरहरु प्रयोग गर्नुपर्छ र साइकल चलाउँदा कतिपय सरुवा रोग नसर्ने साधनहरुको उपयोग गर्नुपर्छ ।
"यहाँ तपाइँले आफूलाई पूर्णत: स्वतन्त्र महसूस गर्नुहुन्छ", एक घण्टाभन्दा टाढा घरबाट ड्राइभ गरेर आएका रोन भ्यान डेर पुटेनले भने- "एउटा नग्नवादीलाई यो जस्तो कपडा खोलेर गर्न पाइने अवसर कहाँ पो जुर्ला र !"